Thwebula APUS Launcher 3.10.18 – Vessoft
AndroidUhleloUkwenza ngokwezifisoAPUS Launcher
Isigaba: Ukwenza ngokwezifiso
Ikhasi elisemthethweni: APUS Launcher
APUS Launcher – indlela fast and kulula nokwandisa desktop. APUS Launcher modifies ideski, inikeza umsebenzi esiphezulu fast and smooth umshini. Isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi nokwandisa, ukuhlanza RAM, ukudala amafolda smart futhi ubandakanya nezincomo service ifu. APUS Launcher ine isicelo evumela ukuthi wena ukunweba ukuphila kwebhetri. Isofthiwe futhi iqukethe iqoqo izicelo zabo siqu ukusetshenziswa elula kwansuku umshini.
Ukwakha of amafolda smart
Cloud Service izincomo
Thwebula APUS Launcher
Amazwana ku APUS Launcher
APUS Launcher software ehlobene
Backgrounds HD – isoftware enesethi enkulu yamaphephadonga ezinhlobo ezahlukahlukene nosayizi. Isoftware isekela usesho lwangemuva ngesilinganiso sabanye abasebenzisi futhi yazisa izithombe ezintsha.
I-GO Launcher EX – isoftware yokwakheka kwesixhumo sedivayisi isebenzisa izikhumba ezihlukile. Isoftware inamathuluzi okwenza ngezifiso ubushelelezi bokugqwayiza, ukusebenzisa amawijethi nosayizi wegridi yesikrini.
I-AnTuTu Benchmark – isoftware enamandla ukuvivinya ukusebenza kwensiza. Isoftware ikhombisa imininingwane eningiwe ngamakhono edivayisi futhi inika amandla ukuqhathanisa imiphumela yokulinganisa namanye amadivaysi.
I-Link2SD – isoftware ukuphatha amafayela nokudlulisa izinhlelo kwimemori khadi. Isoftware iqukethe amathuluzi wokufaka ngokuzenzakalelayo izinhlelo zokusebenza ekhadini le-SD.
Kik – uqedele umphathi ukuze ashintshe imiyalezo phakathi kwabasebenzisi. Isoftware inika amandla ukuxhumana ezingxoxweni zeqembu futhi ibuke okuqukethwe okuhlukahlukene kwemidiya.